Emailvision dia mitohy mandroso amin'ny SmartFOCUS | Martech Zone
Emailvision dia mitohy mandroso amin'ny SmartFOCUS
Alakamisy, Aprily 14, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Taona maro lasa izay, niasa tamina orinasa lehibe nantsoina aho ASTECH InterMedia any Denver, Colorado. Ny orinasa dia orinasa marketing database voalohany ho an'ny indostrian'ny gazety ary tantanan'olona lehibe (sy namana) Tom Ratkovich. Raha tsy tao anaty voambolana i tera dia namolavola sy nanangana trano fitehirizana angon-drakitra marobe momba ny gazety ho an'ny sasany amin'ireo gazety lehibe indrindra eto an-tany isika.
Fotoana nahatalanjona izany ary nitarika ny firosoako tany Indianapolis hamolavola, hampivelatra ary hampihatra ny teknolojia marketing ho an'ny tahiry ho an'ny gazety isam-paritra. Nampiasa fitaovana antsoina hoe SmartFOCUS Viper tao amin'ny gazety izahay tamin'ny alàlan'ny orinasa iray Praesage. Tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miombon'antoka, Bruce Taylor avy ao amin'ny Praesage dia nanangana fitaovana fonenana sy fikatsahana asa ivelan'izao tontolo izao… ary mandroso mandraka androany.
Tena nandroso ireo fitaovana ary nifandray tamin'i Tom aho ary nilaza taminy momba azy ireo… tsy fantatro izay hitranga manaraka! Ny orinasan'i Tom dia naka ny fitaovan'ny Praesage ary nanaparitaka SmartFOCUS ho an'ny mpanjifany. ASTECH InterMedia dia novidian'ny SmartFOCUS - fandrosoana lehibe ho an'ny indostria amerikana.
Taona maro taty aoriana, tamin'ny alàlan'ny fifandraisana tamina matihanina indostrialy sasany, ny orinasanay dia niasa tamin'ny Emailvision. Emailvision dia mpamatsy tolotra mailaka manerantany iza no manitatra ny dian-tongony mihoatra ny mailaka sy finday. Nividy izy ireo vao tsy ela akory izay Tanjona Marketer milentika amin'ny indostrian'ny media sosialy miaraka amina sehatra famoahana sosialy sy fandrefesana lehibe.
Ankehitriny, mividy SmartFOCUS ny Emailvision. Fangaro mitambatra io! SmartFOCUS dia mpikirakira nametraka mpizara / mpizara voalohany indrindra saingy nanambara rindrambaiko ho modely ho an'ny serivisy. Rehefa niaina ny fitaovan'izy ireo taloha, azoko atao aminao ny milaza fa raha sendra mahazo ny tsenan'i SaaS ireo interface ireo dia mpanakalo lalao ho an'ny indostria io. SmartFOCUS dia nampiasa mpanamboatra fangatahana endrika Venn izay nanjary tsotra be ny marketing tahiry. Raha ampiarahina amin'ireo sahan-kajy, ny sehatra no tsara indrindra amin'ny indostria, ary ny tahiry fananana dia haingana kokoa noho ny tahiry fifandraisana hafa izay efa nampiasako hatrizay.
Ny Emailvision dia manana fifandraisana lalina manerana an'izao tontolo izao sy ny indostrian'ny varotra mandroso. Efa nanana marketing marketing mailaka sy sehatra marketing finday izy ireo izay namboarina ho fampiasana ecommerce… ireo fampitambarana sy fisamborana ireo dia hanome ny haitao sy loharanom-pahalalana ho an'ny olona mety hahatonga azy ireo ho fitaovana marketing marani-tsaina indrindra eto an-tany.
Ity misy horonantsary vao haingana avy amin'ny ekipa ao amin'ny Emailvision, mahafinaritra ny mahita fa mbola mifaly izy ireo!
Tontolo lehibe ity, saingy mahagaga ny isan'ny fifandraisana misy ahy izay manohy miverina amin'ny asako. Manantena ny hanohy hiara-miasa amin'ireo orinasa sy olona tsara rehetra ireo aho!
Apr 15, 2011 amin'ny 8: 17 AM
Lahatsoratra tsara Doug. Faly aho fa tianao ilay horonan-tsary koa - manantena bebe kokoa amin'ny ho avy. 🙂